Ukraine - Discover Ukraine. Information about firenena avy any ivelany
Renivohitra : Kyiv
fiteny ofisialy : Okrainiana
Other fiteny : Rosiana
Mponina : 42,500,000
Sandam-bola : Okrainiana Hryvnia (UAH)
Aelin'ny amin'ny : Right
Anjerimanontolo any Ukraine
Useful lahatsoratra momba ny Okraina avy EducationBro Magazine
Official Okrainiana Center fieken-keloka ho an'ny vahiny mpianatra
Best oniversite mba hianatra ny fitsaboana any Ukraine.
Vidim-piainana any Ukraine ho an'ny vahiny mpianatra.
Top 7 ara-teknika anjerimanontolo in Ukraine
Nahoana no mianatra any Ukraine?
Ukraine dia filoha / parlemantera repoblika miaraka ny fahefana nizara eo The Filoha (Lohan'ny ny fahefana mpanatanteraka), Verkhovna Rada (fahefana mpanao lalàna, Parlemanta) ary ny fitsarana rafitra. Ny tena lalàna dia Lalampanorenana nolaniana tamin'ny 1997 Borders dia amin'i Rosia, Belarosia, Polonina, Slovakia, Romania, Moldavia.
Ny renivohitra dia Kyiv (Kiev).
Ny Faritany fisarahana dia 24 faritra.
Okraina dia firenena any Eoropa Atsinanana. Ukraine manamorona ny Federasiona Rosiana any atsinanana sy Avaratra-Atsinanana, Belarosia ny North-West, Polonina,Slovakia sy Hongria ho any amin'ny Andrefana, Romania sy Moldavia ny South-West, ary ny Ranomasina Mainty andSea ny Azov ho any amin'ny Atsimo sy Atsimo Atsinanana, mifanaraka. Manana ny faritra 603,628 km², manao izany ny firenena lehibe indrindra ao Eoropa tanteraka.
Tamin'ny 1999-2001, Ukraine nanompo ho toy ny tsy maharitra mpikambana ao amin'ny Filan-kevitry ny Firenena Mikambana Security. ara-tantara, Sovietika Ukraine nanatevin-daharana ny Firenena Mikambana ao amin'ny 1945 toy ny iray amin'ireo mpikambana voalohany manaraka ny Tandrefana marimaritra amin'ny Firaisana Sovietika, izay nangataka ny seza ho an'ny rehetra 15 ny ny firaisana repoblika. Ukraine no manohana hatrany am-pilaminana, Nifampiraharaha keliny ny disadisa. Efa nandray anjara tamin'ny quadripartite lahateny teo amin'ny ady tany Moldavia, ary nampirisika vahaolana am-pilaminana ny ady ao amin'ny lahatsoratra-Sovietika fanjakan'i Georgia. Ukraine ihany koa no nanao Mitana anjara asa Firenena Mikambana fandriampahalemana, satria 1992.
Ukraine amin'izao fotoana izao dia manana fifandraisana ratsy amin'ny Federasionan'i Rosia.
Ukraine ny ankamaroany dia manana mahonon-tena kontinanta toetrandro. Precipitation dia disproportionately zaraina; izany no avo indrindra any andrefana sy avaratra ary ambany indrindra ao amin'ny atsinanana sy atsimo-atsinanana. Western Ukraine mandray manodidina 1,200 millimeters (47.2 santimetatra) ny Precipitation isan-taona, raha Crimea mandray manodidina 400 millimeters (15.7 santimetatra). Miovaova arakaraka ny ririnina mangatsiaka manamorona ny Ranomasina Mainty ny mangatsiaka lavitra kokoa any afovoan-tany. Eo ho eo isan-taona ny mari-pana any Ukraine miovaova eo +5..+7 C tany avaratra sy +11..+13 C any atsimo.
Ukraine mitana toerana faha-8 tany Eoropa noho ny isan'ny mpizaha tany mitsidika, araka ny World Tourism Fikambanana filaharana. Ukraine dia toerana eo amin'ny sampanan-dalana eo afovoany sy Eoropa Atsinanana, eo avaratra sy ny atsimo. Tandavan-tendrombohitra Manana - amin'ny Tendrombohitra Carpates mety ho tia manao ski ambony, tongotra lavitra, jono sy ny fihazana. Ny morontsiraka ao amin'ny Ranomasina Mainty dia malaza lohataona toerana ho an'ny vakansy. Ukraine manana tanim-boaloboka izay mamokatra teratany divay, sisa tavela amin'ny lapa fahiny, ara-tantara parks, Ortodoksa sy Katolika fiangonana ary koa ny vitsivitsy moske sy ny synagoga. Kiev, renivohitry ny firenena tanàna maro rafitra manam-paharoa toy ny Saint Sophia Cathedral ary malalaka boulevards. Misy tanàna hafa malaza ny mpizaha tany toy ny seranan-tsambo Odessa tanàna sy ny tanàna taloha Lviv any andrefana. The Crimea, kely "kontinanta" ny ny azy, dia malaza ho an'ny mpizaha tany toerana fialan-tsasatra ho an'ny milomano na ny masoandro tanning amin'ny Ranomasina Mainty sy ny mafana toetr'andro, mikitoantoana tendrombohitra, lembalemba sy ny fahiny sisa tavela. Cities misy ahitana: Sevastopol sy Yalta - toerana ny fiadanana fihaonambe tamin'ny faran'ny Ady Lehibe II. Mpitsidika dia afaka ihany koa mandray Cruise fitsidihana niondrana an-tsambo tamin'ny Dniepr River avy any Kiev ho any amin'ny Ranomasina Mainty morontsiraka. Okrainiana nahandro dia manana tantara lava sy manolotra isan-karazany ny sakafo am-boalohany. Ny zava-mahatalanjona fito Ukraine dia fito tsangambato ara-tantara sy ara-kolontsaina an'i Ukraine; ny toerana dia voafidy avy amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny aterineto mifototra amin'ny fifidianana.
Okrainiana Karpaty. Mountaints in Ukraine. Nature.
Odessa Ranomasina Mainty. Port. Ukraine ranomasina
Lviv eny an-dalana. Tongasoa eto Ukraine.
Ukraine toetra. Lake.
Okrainiana fijery. Lviv avy amin'ny Air.
Ukraine toetra. River View. City
Okraina dia iray amin'ireo fivondronana lehibe indrindra ao Eoropa.
Araka ny lalam-panorenana, ny fanjakana fitenin'ny Ukraine dia Okrainiana. Rosiana no be niteny, indrindra fa any Atsinanana sy Atsimo Okraina. Okrainiana dia niteny tamin'ny tandrefana indrindra indrindra sy afovoan'i Ukraine. In Western Ukraine, Okrainiana ihany koa ny teny ao amin'ny tanàn-dehibe indrindra (toy ny Lviv). Ao afovoan'i Ukraine, Okrainiana sy ny Rosiana koa dia samy ampiasaina amin'ny tanàn-dehibe, amin'ny Rosiana satria fahita kokoa any Kiev, raha mbola Okrainiana no misongadina teny amin'ny fiaraha-monina ambanivohitra. Amin'ny atsinanana sy atsimon'i Ukraine, Rosiana no tena ampiasaina ao amin'ny tanàn-dehibe, ary Okrainiana no ampiasaina any ambanivohitra. Ireo tsipiriany hiafara amin'ny fahasamihafana lehibe manerana vokatry ny fanadihadiana hafa, na dia kely tahaka ny restating ny fanontaniana Switches valiny ny manan-danja vondron'olona.
Zavatra tsy niteny. eo ny tenany, ny olona ao aminy tsy mifampiresaka. Raha te hiresaka amin'ny olona iray tamin'ny teny anglisy, fa tsara ny miresaka amin'ny tanora. Mba miteny ny mponina ao an-toerana amin'ny fiteny hafa dia inoana.
Ukraine ny rafi-pahasalamana dia fanjakana famatsiana, ary maimaim-poana ny rehetra sy ny olom-pirenena Okrainiana voasoratra anarana mponina. Na izany aza, tsy an-tery ny hoentina ara-panjakana iray hopitaly toy ny maro ny tsy miankina ny fitsaboana-be no misy ny firenena. -Panjakana mampiasa ny sehatry ny fitsaboana tena matihanina, amin'ireo izay miasa ho an'ny tsy miankina ny fitsaboana foibe matetika ny fanjakana ihany koa ny fihazonana asa araka izay napetraky ny manome fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny trano tsy tapaka.
Ukraine mamokatra saika ny karazam-pitaterana rehetra fiara sy ny sambon-danitra. Antonov fiaramanidina sy KrAZ kamiao no naondrana tany amin'ny firenena maro. Ny ankamaroan'ny Okrainiana fanondranana ireo marketed amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny CIS. Koa satria ny fahaleovantena, Ukraine dia foana ny azy habakabaka fahafahana misafidy, ny National Space Agency Okraina (NSAU). Ukraine lasa mpandray anjara mavitrika amin'ny habakabaka Siantifika fitrandrahana sy lavitra Tsikariny asa fitoriana. Teo anelanelan'ny 1991 ary 2007, Ukraine no nandefa enina tena nanao zanabolana ary 101 fandefasana fiara, ary hanohy hanao ny mari sambon-danitra. Ny firenena manafatra angovo indrindra vatsy, indrindra fa ny solika sy ny entona voajanahary, ary ny iray lehibe hatraiza miankina amin'ny Rosia ho toy ny angovo mpamatsy. raha 25 isan-jato ny entona voajanahary any Ukraine dia avy amin'ny loharano anatiny, about 35 isan-jato avy any Rosia sy ny sisa 40 isan-jato avy any Azia Afovoany fitaterana amin'ny alalan'ny lalana izay Rosia fanaraha-maso. Mandritra izany fotoana izany, 85 isan-jato ny gazy Rosiana Fa raha atolotra Eoropa Andrefana alalan'ny Okraina. Mitsaha-mitombo ny Okrainiana sehatra toe-karena dia ahitana ny vaovao teknolojia (IT) tsena, izay nihoatra ireo hafa Eoropa Afovoany sy Atsinanana firenena 2007, mitombo ny sasany 40 isan-jato. Ukraine laharana fahefatra ao amin'ny izao tontolo izao amin'ny isan'ny voamarina IT matihanina araka ny United States, India sy Rosia.
Ny sakafo nentim-paharazana Okrainiana dia ahitana akoho, Henan-kisoa, omby, trondro sy ny holatra. Okrainiana ihany koa ny mirona hihinana be dia be ny ovy, voa, mamy sy nalona legioma. Malaza dia ahitana sakafo nentim-paharazana varenyky (nahandro dumplings amin'ny holatra, ovy, laisoa nalona, trano bongony fromazy na cherries), borsch (lasopy vita amin'ny betiravy, laisoa sy ny holatra na ny hena) ary holubtsy (nifanizina laisoa horonana feno vary, karaoty sy ny hena). Okrainiana voatokana dia ahitana ihany koa ny Chicken Kiev sy Kiev Cake. Okrainiana misotro stewed voankazo, juices, ronono, buttermilk (trano rantsan-kazo izy ireo manao fromazy avy amin'izany), rano mineraly, dite sy kafe, labiera, divay sy ny horilka.
Ny amin'izao fotoana izao toe-draharaha ara-politika sy ny fiantraikany eo amin'ny mpianatra avy any ivelany
amin'izao fotoana izao, mpianatra vahiny tsy afaka mianatra amin'ny oniversite miorina ao amin'ny faritanin'i ny Crimea sy sasany tanànan'i Donetsk sy Lugansk faritra.
Na izany aza, ny ankamaroan'ny oniversite no nafindra ny trano ao amin'ny tanàna hafa any Ukraine, ary mbola mampiofana ny mpianatra. EdukationBro Tsy fahazoan-dalana hidirana ny mpianatra ho avy hianatra amin'ny anjerimanontolo izay toerana ara-batana eo amin'ny faritanin'i Crimea, Donetsk sy Lugansk faritra. Education in ny sisa amin'ny firenena dia tena azo antoka sy ny mpianatra dia tsy misy olana miatrika raha mianatra any.
Technical National University of Ukraine "Kyiv Politeknika Institute"
National University fiainana sy ny tontolo iainana Siansa any Ukraine
Lviv Politeknika National University
National University ao Kyiv-Mohyla Academy
Ternopil State University Medical
Poltava Technical National University
Ternopil Ivan Pul'uj Technical National University
Kharkiv National University ny Toekarena
Ny National University of Ostrog Academy
National mpahay siansa, University "Kharkov Aviation Institute"
Kharkiv National University ny Radioelectronics
Odessa National Politeknika University
Okrainiana Engineering sy pedagojika Academy
National University fanabeazana ara-batana sy Sports Okraina
Kyiv National University of varotra sy ny Toekarena
Vinnytsia National University Medical